Hifaninana Eo Ambanin’ny Sainan’ny Lalao Olaimpika Ilay Sodaney Tatsimo Mpihazakazaka Lavitr’ezaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2012 2:25 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Magyar, Español, Português, Français, Deutsch, Ελληνικά, 日本語, Dansk, English
Handray njara anatin'ny Lalao Olaimpika any Londona ilay mpanao fanatanjahantena avy any Sodana Atsimo, Guor Marial, saingy tsy eo ambanin'ny sainam-pirenen'ny fireneny. Hifaninana amin'ny lalao hazakazaka lava indrindra anatin'io Lalao io – ny hazakazaka lavitr'ezaky ny lehilahy– amin'ny maha mahaleotena azy i Marial.
I Sodana Atsimo no firenena tanora indrindra eran-tany. Tamin'ny 9 Jolay 2011 izy no nambara ofisialy ho firenena mahaleotena ary mbola tsy ankasitrahan'ny Kaomity Iraisam-pirenenan'ny Lalao Olaimpika (IOC).
Nanoratra momba an'i Guor i Martina Nicolls ao amin'ny Feast na ny bilaogin'ny Hanoanana:
Tamin'ny voalohany dia nanome soso-kevitra an'i Marial hifaninana amin'ny maha-olom-pirenenan'i Sodana azy ny IOC, nefa nandà hisolotena ilay firenena nandosirany fony izy 15 taona i Marial. Nanoratra i Rajib Sen :
Misy mpifaninana roa hafa ihany koa handray anjara eo ambanin'ny sainan'ny Lalao Olaimpika:
Nanadihady an'i Mariala i Nick Weldon avy ao amin'ny bilaogy Runner’s World: